China Sportwear ibhatyi Ihowuliseyili abafazi elungiselelweyo manzi kwaye ngokukhawuleza owomileyo iqokobhe ethambileyo Polar uboya ibhatyi elifutshane yangaphandle ibhatyi mveliso kunye nabenzi | Hengqianxiang
Ijeyile yezemidlalo yokunxiba iimpahla yabasetyhini i-Wholesale engenawo amanzi kunye neqokobhe elomileyo elomileyo lePolar Fleece Jacket elifutshane
Into No: B1911
Iqokobhe: Maleko ezimbini ngelaphu edityanisiweyo, 100% ipholiyesta
Umgca: Akukho Lining
Umbala: Luhlaza, luhlaza, mnyama, mfusa, Mthubi njl
Le bhatyi yezemidlalo ihlale kamnandi ngaphandle kwaye ilaphu alinamanzi kwaye liyomisa ngokukhawuleza. I-zipper nayo ayinamanzi, akukho ngxaki ngemvula encinci ngaphandle, amalaphu aphefumlelweyo avumela ukubila ukuba kuphume ngokukhawuleza.
1. Iyahlala kwaye ihlala kamnandi.
2. Ukolula ngokufanelekileyo.
Ubunzima bokukhanya okhethekileyo kunye nezinto ezishushu. 4, Ilungile imisebenzi yangaphandle kwintwasahlobo nasekwindla.
Ukuba uyayithanda imibala, ke le ibhatyi ikulungele. Ijacket iza ngombala oluhlaza we-aqua kwaye ilungiselelwe ukugqibelela. Itekhnoloji eyomeleleyo yolungelelwaniso oluphezulu igxininisa kakuhle ngombala oqinileyo okunceda ukuba ukhululeke, womile kwaye ukhululeke konke ngaxeshanye. Yinxibe ngeziketi zakho ezimfutshane zesikhumba ukuze ube nesiphumo esihle.
Egqithileyo Ibhatyi engaphandle ende enexabiso lasebusika idakhi engangeni moya phantsi padding yabasetyhini ibhatyi yangaphandle nangoboya bokwenene
Okulandelayo: Abafazi ibhulukhwe emfutshane yangaphandle yeskipa Ukufudumeza okufudumeleyo okungasebenzi manzi okusebenzayo Ihowuliseyili esebenzayo yabasetyhini ikhephu Skii ibhatyi
1. Ukudluliselwa kweTelegraphic, T / T
3. Umanyano lwaseNtshona
4. Imali yeGram
1piece kwingxowa yeplastiki nganye, iziqwenga ezingama-30-50 ziye kwelinye ibhokisi, okanye ngokwemfuneko yesiko.
Sineendlela ezahlukeneyo zokuhambisa kunye nokukhetha indlela efanelekileyo yokuthumela ngokweemfuno zabathengi.
Isambatho esiwayo sabasetyhini
Isinxibo sabafazi basehlobo
Abafazi bayawa iimpahla
Ubunzima ukukhanya Super phantsi ibhatyi kunye d Fashional ...
2019 abafazi ezimnyama fashion faux yesikhumba ibhatyi em ...
Ebusika Ezantsi ibhatyi abafazi umenzi d entsha ...
Abafazi elifutshane yangaphandle Ski ibhatyi Ubushushu wate wate ...
Super efudumeleyo abafazi ebusika puffer elide ngaphandle ja ...
Ngeliquilted padded Puffer iibhatyi Cas yangaphandle imidlalo ...